रसुवा र नुवाकोटको पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामी रणनीतिक रुपमा लाग्दैछौ :अध्यक्ष न्यौपाने
प्रकाशित मिति: 2016/07/13
बलराम न्यौपाने, अध्यक्ष, रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाज
असार २९, काठमाण्डौ । बलराम न्यौपाने, रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ४ बर्षअघि स्थापना भएको रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाज विशुद्ध रुपमा त्यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रका साथै आर्थिक सामाजिक विकाशमा समेत सरिक हुँदै आएको छ । रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजले हालसम्म गरेका कामकारवाही, भावि कार्यदिशा र यसको औचित्यमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने कोशिस गरेका छौ । प्रश्तुत छ, समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपाने सँगको ५ प्रश्न ।
१ रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजले के गर्दैछ ?
रसुवा–नुवाकोट समाज विशुद्ध रुपमा यस क्षेत्रको विकाशका लागि केन्द्रीत भएको संस्था हो । यसमा रसुवा–नुवाकोटमा रहेका पर्यटनसँग सम्बन्धीत व्याक्तिहरुको साझा संस्था भएकाले काठमाण्डौ मै रहेर पनि आफ्नो क्षेत्रको विकाशमा थोरबहुत योगदान पुर्याउन सकौ भनेर हामी लागीपरेका हौ । २०७० सालबाट स्थापना भएर अगाडि बढिरहँदा यस क्षेत्रको पर्यटनको विकाशमा हाम्रो सदैव तत्परता रहँदै आएको छ । विशेषतः भुकम्पपछि लाङटाङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा केही क्षति पुर्याएपनि अहिले सुधार हुँदै पर्यटकहरुको आवगमन बृद्धि हुने क्रम जारी छ । यस अर्थमा हामीले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सकारात्मक भुमिका निर्वाह गरिरहेको स्थीति हो ।
२. विशेषतः भुकम्पपछिकै स्थीतिमा यहाँहरुको भुमिका अझ कमजोर देखिएको अवस्था त हो नि ?
यहाँले भनेजस्तै भुकम्पपछिको स्थीतिमा त्यस क्षेत्रमा रहेका पदमार्गहरुमा जुन किसिमको अवरोध हुन पुग्यो यसले निश्चयनैः त्यस क्षेत्रको पर्यटन आवगमनमा केही समस्या आएको स्थीति अवश्य पनि हो । यद्यपी अहिलेको अवस्थामा पदमार्गहरुको अवस्था सुधार भइसकेको अवस्था छ भने पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामी हामी सक्रिय भएर लागेका छौ ।
३.तर यहाँहरु पर्यटन विकाशको लागि भन्दा पनि तपाई आफै पनि काठमाण्डौ केन्द्रित मात्रै हुनुभयो, पर्यटन प्रवर्दन र विकाशमा समाजको भुमिका कमजोर देखियो भन्ने गुनासो छ नी ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मुख्य कुरा त म र हाम्रो संस्था त्यस क्षेत्रको पर्यटनका साथसाथै आर्थिक र सामाजिक विकाशका पाटोलाई मजबुत बनाउन नै लागिपरिरहेको स्थीति हो । जहाँसम्म काठमाण्डौ केन्द्रित भन्ने सवालमा गाँउ बसेर नै सबै गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । यहाँ भएका अवशरलाई गाँउमा लैजान यहाँ बसेकै कारणले संभव भएको हो । मेरो आफ्नै एकल प्रयासमा पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका अतिरिक्त, स्वास्थ्य शिविरका लागि बरिष्ठ चिकित्सकहरुको टोली गाँउमा पुर्याएको छु, शिक्षा क्षेत्रका लागि पनि विद्यालय निर्माण देखी लिएर निशुल्क छात्रबृत्ति कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहित गर्न अहोरात्र लागि परिरहेकै स्थीति हो । पर्यटन पवद्र्धनकै लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने, पर्यटक प्याकेज कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको स्थीतिले पनि व्यवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन ।
४. बिशेषतः भुकम्पपछिको लाङटाङ क्षेत्रको विकाशमा यहाँहरुको भुमिका खै ?
हेर्नुस, रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजले विशेष महत्व दिएको क्षेत्र हो लाङटाङ । भुकम्पलगत्तै पदमार्गहरुमा जुन खालका अप्ठेराहरु थिए निष्चयनै राज्यको ध्यान पनि जान सकिरहेको थिएन । यद्यपी हामीले आफ्नै पहलमा पनि अवरुद्ध पदमार्गहरुको निर्माणका लागि सरकारसम्म आवाज पुर्याउने र अहिले पदमार्ग सुचारु भैसकेपछि पनि लाङटाङ सुरक्षित छ भन्ने विषयलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको स्थीति हो । यसर्थ सरकारसँग सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रको विकाशमा हामी निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छौ ।
५. अन्त्यमा, यहाँहरुको भावि कार्यदिशा के छ ? पर्यटन क्षेत्रको लागि यहँहरुको कदम के हुनेछ ?
समाजले भोली मात्रै १९ सदस्यिय कार्यसमिति विस्तार गर्दै छ । यस अर्थमा कार्यसमिति सदस्य बढिभन्दा बढि बनाउनुका साथै समाजका माध्यमबाट त्यस क्षेत्रको विकाशमा अझ ससक्त रुपमा लाग्ने प्रतिबद्धताका साथ भेला आयोजना हुन गइरहेको छ । यस अर्थमा हामी निरन्तर रुपमा आआफ्नो तहबाट त्यस क्षेत्रको विकाशमा लागि परिरहने नै छौ ।